Tierra del Fuego: àgwà, mmalite na ụdị dị iche iche | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 30/11/2021 10:34 | Nkewa
Ebube na nke pụrụiche, dị ka aha ahụ pụtara. Tierra del Fuego, nke ọdụdụ n'ógbè Argentina, ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị na-ewere dị ka oké ala. Ọ bụ n'ezie njedebe nke ụwa, ọ bụghị nanị n'ihi ịdị anya kamakwa n'ihi enweghị nkwurịta okwu na gburugburu ebe obibi. Ma nke bụ eziokwu bụ na agwaetiti a, ọbụna taa, enweghị ike ịnweta naanị ikuku. O nwere njirimara pụrụ iche na ụdị ndụ dị iche iche.
Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a na-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere Tierra del Fuego, kedu ihe bụ àgwà na curiosities.
1 Mmalite na akụkọ ihe mere eme nke Tierra del Fuego
2 ihu igwe
3 Oke na ọnụ ọgụgụ ndị Tierra del Fuego
Mmalite na akụkọ ihe mere eme nke Tierra del Fuego
Njirimara anụ ahụ nke Tierra del Fuego dị iche iche. Ihe ka ukwuu n'akụkụ ugwu nke agwaetiti bụ́ isi bụ ala glacial mejupụtara, ọkachasị ọdọ mmiri na morain. Ogologo ya erughị mita 180. Osimiri Atlantic na Strait nke Magellan dị ala.
N'ụzọ dị iche, n'ebe ndịda na n'ebe ọdịda anyanwụ akụkụ nke isi agwaetiti na achipelago bụ ndọtị nke Andes, nke nwere ọnụ ọnụ ya karịrị 7.000 ụkwụ, karịsịa àgwà ugwu glaciers nke Sarmiento, Darwin na Tierra del Fuego.
Enwere oke ọhịa beech dị n'etiti etiti agwaetiti ahụ ma ahịhịa kpuchiri ala dị larịị nke ugwu. Ọkwọ ụgbọ mmiri bụ́ Fernando de Magallanes chọtara àgwàetiti ndị ahụ na 1520 mgbe o si n’ọdụ ụgbọ mmiri ahụ a na-akpọ aha ya gafee, ma kpọọ ya ógbè Tierra del Fuego.
Ọtụtụ ndị njem gafere n'ógbè ahụ, ma ọ bụghị ruo mgbe British Admiralty mere nyocha zuru ezu n'okirikiri niile. n'etiti 1826 na 1836 ha nwara nyocha usoro. Ruo afọ 350 ka njem Magellan gachara, mpaghara ahụ anọwo na-arụ ọrụ na-enweghị mgbagha nke ndị obodo ya. Ndị India, Ona, Yahgan na Alacaluf India.
Na "njedebe nke ụwa," na Tierra del Fuego mpaghara nke Argentine Archipelago, e nwere akụkọ ihe mere eme doro anya nke mmezi Europe. N'ịbụ ndị mmeri nke ọla edo, mmanụ na ala ahịhịa juru, ndị Europe ji ụgbọ mmiri gaa mpaghara ndịda a na-atụ anya inweta ego.
Taa, obodo ndị dị n'ebe ndịda Argentina dabeere n'akụkọ ihe mere eme nke a bara ụba. Otú ọ dị, tupu ndị mba ọzọ abata, e nwere ụfọdụ ndị a na-amaghị ama. Ndị Yaghan (ma ọ bụ Yamana), Alacaluts, na ndị Ona gara n’otu oge site n'ebe a tọgbọrọ n'efu ma nagide ọnọdụ ihu igwe siri ike. Anụ ọhịa na ihe ndị dị n'oké osimiri bụ́ ndị ha dabeere na ha nwetara obere asọmpi.
Ihu igwe Tierra del Fuego dị mma n'oge ọkọchị na oyi na-atụ n'oge oyi, na-enwe nnukwu ọdịiche nke mmiri ozuzo kwa afọ sitere na sentimita 180 (4.600 mm) na Bahía Félix nke dị n'agwaetiti ọzara Chile ruo inch 20 na Río Grande, Argentina. Na mpaghara ndịda na ọdịda anyanwụ nke ekpughere, ahịhịa na-ejedebeghị na mosses na osisi.
Ihu igwe dị na mpaghara a adịghị mma maka ibi ndụ. Ọ bụ nke ihu igwe nke oke osimiri subpolar (Köppen CFC nhazi ihu igwe), nke nwere oge okpomọkụ dị mkpụmkpụ ma dị jụụ, ogologo oge na udu mmiri: e ji oke ifufe mara ugwu ọwụwa anyanwụ, ebe ndịda na ọdịda anyanwụ enweghị ntakịrị mmiri ozuzo, na ọtụtụ oge ọ na-ekuku, ikuku na-eju oyi, na iru mmiri. Enwere ụbọchị ole na ole na-enweghị mmiri ozuzo, akụ mmiri igwe, akụ mmiri igwe, ma ọ bụ snow.
Ahịrị snow na-adịgide adịgide na-amalite na 700 m n'elu oke osimiri. Isla de los Estados dị kilomita 230 n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Ushuaia, nke nwere mmiri ozuzo 1.400 mm. Ebe ọdịda anyanwụ na-enweta oke mmiri ozuzo kacha njọ, 3.000 mm kwa afọ.
Okpomọkụ na-adịgide otu ihe ahụ n'afọ niile: na Ushuaia, Okpomọkụ n'oge ọkọchị anaghị agafe 9 Celsius C, na nkezi okpomọkụ n'oge oyi bụ 0 Celsius. Mmiri mmiri ozuzo nwere ike ime n'oge okpomọkụ. Oge okpomọkụ na oyi na-atụ na-enyere aka ichebe glaciers oge ochie.
Àgwàetiti ndịda nke dị n'ebe ndịda nwere ihu igwe tundra dị n'okpuru ala, nke na-egbochi osisi itolite. Akụkụ nke mpaghara ime obodo nwere ihu igwe pola. Mpaghara nke ụwa nwere ihu igwe yiri ya na ndịda Tierra del Fuego bụ Àgwàetiti Aleutian, Iceland, Ala Alaska Peninsula, na Agwaetiti Faroe.
Oke na ọnụ ọgụgụ ndị Tierra del Fuego
Tierra del Fuego, nke kwekọrọ na Antarctica na South Atlantic, bụ otu n'ime ógbè 23 nke Argentina. N'otu oge ahụ, ọ bụ otu n'ime mpaghara 24 kwụụrụ onwe ya mebere obodo ahụỌ bụkwa otu n'ime mpaghara omebe iwu obodo iri abụọ na anọ, gbasara isi obodo ya Ushuaia na obodo kacha biri, ọ bụ agwaetiti nke Argentina.
Patagonia, nke dị na oke ndịda Argentina, nwere nnukwu agwaetiti, oke osimiri na ókèala Antarctic, nke sitere na Tierra del Fuego ruo Antarctica, gụnyere Staten Island, agwaetiti Falkland, South Atlantic Islands na Antarctic Peninsula. A na-emepụta triangle, akụkụ meridian bụ 74 ° W na 25 ° W apex na South Pole.. Na America, ógbè ahụ dị n'akụkụ Santa Cruz n'ebe ugwu, Chile n'ebe ọdịda anyanwụ, ọwa Beagle dị na ndịda, na Chile n'ebe ndịda. Antarctica, ógbè ahụ dịkwa n'ókè ọdịda anyanwụ Chile, mana ekpebibebeghị ókè ya.
Banyere ndị bi na ya, Darwin lanarịrị ọnọdụ ọjọọ ahụ wee mee omume ọjọọ, na-akọwapụta mba pụrụ iche n'ọdịbendị a na àgwà ọjọọ ya, na-enye ha aha nke "Onyenwe anyị na-adịghị mma nke ala a nhụsianya."
Obodo na omenala dị iche na Yaghan, Ona bụ ndị bi na ala. Ha nwere otu isi abụọ: Hausch na Selk'nam. E nwere nkewa abụọ na nke ikpeazụ, otu dị na mbara ọzara dị n'ebe ugwu nke Osimiri Ọkụ, nke ọzọ dị na ogige ndịda na mpaghara ọhịa.
N'adịghị ka ndị nọ n'akụkụ osimiri, ndị a buru ibu ma lanarị ịchụ nta guanaco na tuco-tuco (osisi nke na-eji ụta na akụ dị ka ngwa agha). Ka ọ dị ugbu a, Argentina, ị gaghị ahụ ihe ọ bụla gbasara otu ụmụ amaala a. Ịlanarị n'akụkụ ụwa na-adịghị mma, Yaghan, Alacaluts na Ona ha gosiri na ha bụ ndị siri ike na ndị na-adịgide adịgide. Otú ọ dị, àgwà ndị a echebeghị ha pụọ ​​ná nbata nke ọrịa na omenala mba ọzọ.
Nchọpụta nke akụ ndị sitere n'okike nke ndị Spen, na ndị ọzọ bi na Europe mechara, wetara mgbanwe ngwa ngwa na omenala akụkọ ihe mere eme ndị a. Ọrịa Europe kpochapụrụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ abụọ ahụ, na ndị lanarịrị chere nsogbu nke mbibi omenala ihu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Tierra del Fuego na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Tierra del Fuego